China Carbon eriri abụọ ụzọ ejikọta anwụrụ rụpụta na Factory | Yan Tuo
Anyị niile maara na ọ gaghị ekwe omume ịgbanye eriri carbon carbon na teknụzụ nhazi ọdịnala, n'ihi na ọ ga-emebi usoro nke eriri carbon. Ya mere, ejiri akụkụ aluminom dochie anya abụọ. Ma ọ bụ jiri resin na gluu jikọta akụkụ carbon fiber nke arụpụtara na eriri carbon mbụ.
3K Glossy / Matte / dị ka achọrọ
Akwụkwọ Box, ụfụfụ, High Pressure Bag
500mm * 58mm * 78mm Dị ka achọrọ
5000 iberibe kwa ọnwa
Polyacrylonitrile-Dabere Carbon Fiber
Nnukwu uru nke ngwaahịa
Anyị niile maara na ọ gaghị ekwe omume ịgbanye eriri carbon carbon na teknụzụ nhazi ọdịnala, n'ihi na ọ ga-emebi usoro nke eriri carbon. Ya mere, ejiri akụkụ aluminom dochie anya abụọ. Ma ọ bụ jiri resin na gluu jikọta akụkụ carbon fiber nke arụpụtara na eriri carbon mbụ. Ime nke a ga - efunahụ arụmọrụ nke carbon fiber tube n'onwe ya, na nkwụsi ike na nkwụsi ike ga-ebelata nke ukwuu. Iji dozie nsogbu a, anyị na-agbalị iji machining ụzọ ike a zuru ezu carbon eriri njikọ. Mgbe ọtụtụ nyochachara, anyị mechara chọta usoro mmepụta anụ. N'ikpeazụ anyị ghọtara mwekota nke eriri carbon na-ejikọ ọkpọkọ. Njirimara nke anụ ahụ na kemịkal nke tubụ emeela nke ọma
1.Connecting akụkụ na nnukwu ngwá
2.Two-ụzọ ejikọta anwụrụ maka pipeline
Ngwaọrụ 3.Military, akụrụngwa ahụike, akụrụngwa akụrụngwa
1. Ike dị elu: Ike nke eriri carbon bụ oge 8-10 nke ígwè, na-adịkarị karịa 3500mpa, na arụmọrụ magburu onwe ya nwere ike iru 5000mpa.
2. Obere njupụta na ịdị arọ dị nro, njupụta ahụ bụ naanị 1/4 nke nchara.
Carbon fiber tube nwere uru nke ike dị elu, ndụ ogologo oge, nkwụsị corrosion na ịdị arọ ọkụ. A na-eji ya na ngwaahịa dịka kites, ụgbọ elu nke ụgbọ elu, nkwado dị iche iche, akụrụngwa akụrụngwa, akụrụngwa akpaaka, igwe etching, ndị na-ahụ maka ahụike, akụrụngwa egwuregwu na ihe ndị ọzọ. A usoro nke magburu onwe Njirimara dị ka akụkụ kwụsie ike, eletriki conductivity, kwes conductivity, thermal conductivity, obere thermal mgbasa ọnụọgụ, onwe-n'ígwè, ike absorption na ujo eguzogide. Ma nwere njirimara nke modulu a kapịrị ọnụ, ike ọgwụgwụ, nkwụsi ike, nguzogide okpomọkụ dị elu, nkwụsi ike na ihe ndị ọzọ.
Nke gara aga: 3K PlainTwill kpaa Carbon Fiber mpempe akwụkwọ
Osote: Faiba glaasi tube
Carbon eriri tube maka mma
3K PlainTwill kpaa Carbon Fiber mpempe akwụkwọ